ဖန်တစ်ယောက်ရဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့ Surprise ကြောင့် အံ့သြားသင့်ခဲ့ရတဲ့ ထူးအောင် - Cele Connections
ဖန်တစ်ယောက်ရဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့ Surprise ကြောင့် အံ့သြားသင့်ခဲ့ရတဲ့ ထူးအောင်
အမိုက်စား ဘော်ဒီ နဲ့ ယောက်ျားပီသတဲ့ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားတွေကြောင့် မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ ထူးအောင်ကတော့ အမိုက်စား six pack တွေနဲ့ ညှို့ယူဖမ်းစားထားတာပါ ။ လတ်တလောမှာတော့ ဘဝတူ အနုပညာသမားတွေကို Body Train ပေးနေတဲ့ Trainer တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ကိုယ်ပိုင် Body Fitness တစ်ခုကိုလည်း တည်ထောင်ထားပြီး အနုပညာပိုင်းမှာရော fitness ပိုင်းမှာပါ အရည်အချင်းရှိတယ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ ။
ထူးအောင်ကို ချစ်ခင် အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့ အမာခံဖန်တွေကလည်း အများအပြားပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ ..။ ရိုက်ကူးရေးကနေ ပြန်လာတဲ့အချိန် ဟိုတယ် Reception မှာ ထူးအောင်ဖန်တစ်ယောက်က အရုပ်လေးတစ်ရုပ်ပေးထားခဲ့လို့ မန်နေဂျာကို အခန်းထဲထည့်ထားပေးပါလို့ မှာပြီး နှစ်ရက်လောက် အရုပ်ကိုသေချာမကြည့်မိဘူးလို့ ထူးအောင်က ဆိုပါတယ် ။ တစ်ရက်မှာတော့ အရုပ်ကို သတိထားမိပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ . ” I’m always be your fan My Idol open my heart pls “လို့ရေးထားတဲ့ စာလေးကြောင့် အရုပ်ရဲ့ ရင်ဘတ်ကို ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ iPhone 11 Pro Max 512 GB နောက်ဆုံးပေါ် အိုင်ဖုန်းဖြစ်နေတာကြောင့် အံ့သြားသင့်ပြီး ပျော်ခဲ့ရတယ်လို့ထူးအောင်က ပြောပြခဲ့ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ထူးအောင်က iPhone 11 Pro Max 512 GB ကို လက်ဆောင်ရတဲ့ အရောင်အတိုင်း တစ်လုံးမှာထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ အတွက် ဖန်လေး ပေးတဲ့ လက်ဆောင်ကိုသာ ကိုင်မှာဖြစ်ပြီး သူ့ဖုန်းကိုတော့ ပြန်ရောင်းလိုက်တော့မယ်လို့ ပရိသတ်တွေကို စနောက်နေခဲ့တာပါ ။ သူ့အတွက်တော့ တန်ဖိုးနည်းတာ တန်ဖိုးကြီးတာ အဓိက မဟုတ်ဘဲ ပရိသတ်တွေရဲ့ ပေးချင်တဲ့စိတ်စေတနာနဲ့ သူ့ကိုအားပေးတဲ့အရာတစ်ခုကို သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ခွန်အားဖြစ်ပါတယ်လို့လည်း ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
ဖနျတဈယောကျရဲ့မထငျမှတျထားတဲ့ Surprise ကွောငျ့ အံ့သွားသငျ့ခဲ့ရတဲ့ ထူးအောငျ
အမိုကျစား ဘျောဒီ နဲ့ ယောကျြားပီသတဲ့ခန်ဓာကိုယျ အခြိုးအစားတှကွေောငျ့ မိနျးကလေး ပရိသတျတှကွေားမှာ ရပေနျးစားနတေဲ့ ထူးအောငျကတော့ အမိုကျစား six pack တှနေဲ့ ညှို့ယူဖမျးစားထားတာပါ ။ လတျတလောမှာတော့ ဘဝတူ အနုပညာသမားတှကေို Body Train ပေးနတေဲ့ Trainer တဈယောကျ လညျး ဖွဈပါတယျ ။ ကိုယျပိုငျ Body Fitness တဈခုကိုလညျး တညျထောငျထားပွီး အနုပညာပိုငျးမှာရော fitness ပိုငျးမှာပါ အရညျအခငျြးရှိတယျအနုပညာရှငျတဈယောကျပါ ။
ထူးအောငျကို ခဈြခငျ အားပေးကွတဲ့ ပရိသတျတှနေဲ့ အမာခံဖနျတှကေလညျး အမြားအပွားပါပဲ ပရိသတျကွီးရေ ..။ ရိုကျကူးရေးကနေ ပွနျလာတဲ့အခြိနျ ဟိုတယျ Reception မှာ ထူးအောငျဖနျတဈယောကျက အရုပျလေးတဈရုပျပေးထားခဲ့လို့ မနျနဂြောကို အခနျးထဲထညျ့ထားပေးပါလို့ မှာပွီး နှဈရကျလောကျ အရုပျကိုသခြောမကွညျ့မိဘူးလို့ ထူးအောငျက ဆိုပါတယျ ။ တဈရကျမှာတော့ အရုပျကို သတိထားမိပွီးကွညျ့လိုကျတဲ့အခြိနျမှာတော့ . ” I’m always be your fan My Idol open my heart pls “လို့ရေးထားတဲ့ စာလေးကွောငျ့ အရုပျရဲ့ ရငျဘတျကို ခှဲကွညျ့လိုကျတဲ့အခါမှာတော့ iPhone 11 Pro Max 512 GB နောကျဆုံးပျေါ အိုငျဖုနျးဖွဈနတောကွောငျ့ အံ့သွားသငျ့ပွီး ပြျောခဲ့ရတယျလို့ထူးအောငျက ပွောပွခဲ့ပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ ထူးအောငျက iPhone 11 Pro Max 512 GB ကို လကျဆောငျရတဲ့ အရောငျအတိုငျး တဈလုံးမှာထားပွီးသားဖွဈတဲ့ အတှကျ ဖနျလေး ပေးတဲ့ လကျဆောငျကိုသာ ကိုငျမှာဖွဈပွီး သူ့ဖုနျးကိုတော့ ပွနျရောငျးလိုကျတော့မယျလို့ ပရိသတျတှကေို စနောကျနခေဲ့တာပါ ။ သူ့အတှကျတော့ တနျဖိုးနညျးတာ တနျဖိုးကွီးတာ အဓိက မဟုတျဘဲ ပရိသတျတှရေဲ့ ပေးခငျြတဲ့စိတျစတေနာနဲ့ သူ့ကိုအားပေးတဲ့အရာတဈခုကို သိလိုကျရတဲ့အခြိနျမှာ ခှနျအားဖွဈပါတယျလို့လညျး ပွောပွခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။
အိချောပိုရယ်၊ မေမြင့်မိုရ်ရယ်လို့ ရွေးမချစ်ပဲ နှစ်ယောက်စလုံးကို ချစ်ပေးပါလို့ပြောလာတဲ့ အိချောပိုနဲ့ မေမြင့်မိုရ်
“Covid 19 ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဈေးကွက်ပျက်သွားနိုင်မယ့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ကျော်သူ”
” ရွှေထူးရဲ့ မမဆယ်လီ သီချင်းနဲ့ အပီအပြင်ကနေတဲ့ သမီးလေးcoco ကို ချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ မေမေချောရတနာ”